India maul Zimbabwe; clean sweep ODI series - NewsX
India maul Zimbabwe; clean sweep ODI series
15 June 2016,
Harare: India, after restricting a lacklustre Zimbabwe to a paltry 123 in 42.1 overs, took just 21.5 overs to achieve the target and outplayed Zimbabwe by 10 wickets with the help of brilliant half centuries from the openers KL Rahul and Faiz Fazal.
After bowling out the hosts for just 123 in 42.1 overs India didn’t waste much time to clinch their third consecutive victory against the hosts Zimbabwe and got past the target in just 21.5 overs to ensure a clean sweep in the ODI series.
KL Rahul continued his master form and played brilliantly, scoring a 70 balls 63, supported by another promising youngster Faiz fazal who played an outstanding knock of 55 off just 61 deliveries to take India to a comfortable 10 wicket win over Zimbabwe.